I-NNPC-DRM i-Undergraduate Scholarship yaseNigeria | Ungasifaka njani isicelo kwaye uphumelele ngo-2022
I-NNPC-DRM i-Undergraduate Scholarship yaseNigeria | Indlela yokufaka kunye nokuphumelela
Nantsi yonke into ofuna ukuyifumana malunga ne-NNPC-DRM yezifundo zesidanga sokuqala, indlela yokufaka kunye nokuphumelela, iikhrayitheriya zokufaneleka, inani elibandakanyekayo, ixesha lesicelo kunye nokunye okuninzi.
I-Chevron Nigeria Limited, ngokubambisana neqabane layo elidibeneyo, iNigerian National Petroleum Corporation (NNPC) ibonelela ngezifundo minyaka le ukuze zinike abafundi abagqwesileyo nabangathathi ntweni ukuze babenze imfundo yaseyunivesithi.
Esi sicelo kwiimeko ezininzi zabafundi abakwiminyaka yesibini abagqibeleleyo abangabafundi bokwenyani bamaziko oluntu awaziwayo kwilizwe liphela.
I-DRM yenye yeenkampani ezinkulu ezivelisa ioyile kwihlabathi liphela. Unyaka nonyaka, babonelela abafundi ngezifundo ezininzi kumaziko emfundo ephakamileyo nakwamanye amanqanaba emfundo emhlabeni.
Le ngcaciso ivulelekile kubafundi bezobunjineli, amayeza, umthetho kunye nezifundo zolawulo kodwa oko akuthethi ukuba abafundi abafunda ezinye iikhosi ezahlukeneyo kumaziko abo abanako ukufumana le ngxowa-mali, emva koko, awuyi kukwazi ukuba Ndiza kuphumelela ngaphandle kokuba uyazama.
Ixabisa malini i-DRM Scholarship Worth?
I-DRM Masters Scholarship Worth
Ngubani onokufaka isicelo kwi-DRM Scholarship eNigeria?
Iikhosi ze-DRM zezifundo ezifanelekileyo
Yeyiphi i-CGPA ekufuneka ndiyifakile kwisicelo se-DRM?
Siqala nini isicelo sokufunda kwe-DRM?
I-DRM yezifundo ezigcweleyo zeNigerians
Indlela yokufaka isicelo kwi-DRM scholarship eNigeria
Iingcebiso malunga nendlela yokuphumelela i-DRM yezifundo zesidanga sokuqala
Hambisa isicelo sakho ngexesha
Thobela imigaqo ekhokelayo yokufunda
Qonda amanqanaba abandakanyekayo kwaye ulandele ngobulumko
Funda imibuzo edlulileyo kwaye uzame ukuqonda uhlobo lwemibuzo yabo
Gcina i-CGPA elungileyo kakhulu
Isiphelo kunye neNcomo
I-NNPC-DRM yokufunda kufanelekile phakathi I-100,000 NGN ukuya kwi-150,000 NGN kuxhomekeke kudidi. I-DRM Masters scholarship efanelekileyo ayifani ne-DRM Undergraduate scholarship.
I-DRM yezifundo zabafundi beemasters kufanelekile malunga nayo Ngama-200,000 NGN nangona iyahluka ngokuxhomekeka kudidi.
Isifundi se-DRM kulindeleke ukuba sibe neziqinisekiso ezithile ngaphambi kokufaka isicelo. Abantu abanokufaka isicelo sale mali yokufunda zezi:
Umfundi waseNigeria okanye wamazwe aphesheya ufunda nakweyiphi na iyunivesithi yoluntu eNigeria.
I-200level yaseNigeria igraduate ye-undergraduate scholarship. I-DRM ibonelela ngezifundo zokuthweswa isidanga.
Isifundi asithintelwanga kubuNjineli kodwa ukuvela kwicandelo lobunjineli sisixhobo esongeziweyo kumfundi. Abafundi bezonyango nabo bahlala ithuba eliphezulu.
Umfundi kufuneka abe ne-CGPA yokulinganisa iklasi yesibini nangaphezulu ngokuxhomekeke kwinqanaba lokulinganisa leyunivesithi ngexesha lokufaka isicelo.
Abafundi abanobuntu obudumileyo nobufanelekileyo njengentloko yesebe banendima ebaluleke kakhulu ekufuneka bayidlale ekucebiseni.
Umzimba wokufunda waseChevron ungenza izigqibo minyaka le ukongeza iikhosi ezintsha kuluhlu lweenkqubo ezifanelekileyo zokufaka isicelo sokufunda okanye ngenye indlela, kodwa okwangoku, apha ngezantsi luluhlu lwezifundo ezinokufaka isicelo semfundo yokufunda kwiChevron undergraduate eNigeria. Abafundi besidanga sokuqala kula masebe banokufaka isicelo sokufunda kwiChevron;
Ulawulo lwezoShishino / uQoqosho
Inzululwazi yeKhompyuter / ubuNjineli beKhompyuter / ubuNjineli beeNkqubo
Ubunjineli boMbane / boMbane
Izifundo zokusiNgqongileyo / uPhando
I-Geology / iGeophysics
Unxibelelwano ngobuninzi / ubuNtatheli
Oomatshini / Ubunjineli beMetallurgical & Material
Amayeza oLuntu / amazinyo / ikhemesti
I-DRM yezifundo zemfundo ikakhulu zezabafundi abagqwesileyo kwizifundo zabo nakwinqanaba eliphezulu leklasi yabo.
Kwezinye iiyunivesithi, udidi lwesibini oluphezulu luvela kwi-CGPA ye-3.5 ngelixa kungenjalo kwezinye izikolo; Kwiimeko ezininzi kuxhomekeke kwinkqubo yokwahlula eyunivesithi / yesikolo kodwa nangona kunjalo, i-DRM yezifundo zesidanga sokuqala ifuna ukuba abafaki zicelo babe neklasi yesibini ephezulu ye-CGPA nangaphezulu. Nantoni na engaphantsi ayamkelekanga.
I-DRM ye-undergraduate scholarship iqala nge-Meyi ngonyaka kwaye iphela ngo-Septemba.
Ukulungela i-DRM yezifundo zesidanga sokuqala kubantu baseNigeri, kukho iimfuno ezithile ekufuneka zifezekisiwe ukuze zikwazi ukugqiba isicelo ngempumelelo kwaye ezi mfuno zesicelo zidweliswe ngokufanelekileyo apha ngezantsi;
Ifoto yokundwendwela enemvelaphi emhlophe engekho ngaphezulu kweenyanga ezintathu.
Ikhadi lezazisi zeSikolo
IJAMB kunye neleta yokwamkelwa kwabafundi eSikolweni
Incwadi yoLuntu yeNdawo yoLwazi
Isiteyitimenti sesiphumo okanye ingxelo ebhaliweyo etyikitywe ngokufanelekileyo yaza yafakwa isitampu esikolweni ichaza iziphumo zeseshoni yangaphambili CGPA ngokucacileyo (Oku kuhlala kusayinwa ngumcebisi wekhosi yakho)
Kutshanje iqumrhu labafundi be-DRM longeze iNombolo yeSazisi sikaZwelonke njengenxalenye yeemfuno zabo zesicelo ke kuya kufuneka uyifumane ukuba awunayo.
Phambi kokuba uqale isicelo sakho, qiniseka ukuba unawo onke amaxwebhu ayimfuneko ukuze ugcwalise isicelo kwaye uskenwe ngokufanelekileyo.
Ndwendwela iwebhusayithi ye-DRM kwaye ucofe kwiiScholarships kwaye wenze ngononophelo iakhawunti okanye ngokuthe ngqo yenza iakhawunti ngeScholastica.
Yiya kwibhokisi yakho ye-imeyile ukwenza iakhawunti yakho isebenze
Faka ulwazi lwakho lomntu siqu, ulwazi olongezelelweyo, ulwazi lwezemfundo, olunye ulwazi olufunekayo kwaye emva koko ulayishe amaxwebhu afunwayo afunwayo.
Ngenisa ifoto yakho yokundwendwela ekufuneka ikwimvelaphi emhlophe.
Jonga isicelo sakho ukunqanda iimpazamo ezingeyomfuneko, kwaye uqinisekise ukuba uyawajonga onke amaxwebhu emva kokulayisha. Igama lakho kuxwebhu ngalunye kufuneka libhalwe ngendlela efanayo kunye nepateni kodwa ukuba kungenjalo, kuya kufuneka ulayishe ikopi yengxelo efungelweyo yenkundla yokuqinisekisa.
Xa zonke iibhokisi ezifunekayo zigcwalisiwe, cofa kuThumela iSicelo kwaye ulinde i-imeyile yokuqinisekisa ukuqinisekisa ukuba isicelo sakho sidlulile.
Ukuba kunokwenzeka ukuba uphakathi kwebhodi yokufunda yokufunda yayo nayiphi na le mibutho, uyakuqonda ukuba kubaluleke kangakanani ukufaka ukhathalelo olongezelelweyo xa ufaka isicelo.
Kwangoko ungenise isicelo sakho, ngcono. Kungenxa yokuba ukungenisa isicelo sakho ngexesha kukunika umda ngaphezulu kwabanye abantu abanokuthumela kwisicelo sabo kamva.
Kukho amawaka abafundi kulo lonke ilizwe abanesidingo esikhulu semfundo efanayo oyifunayo. Ke ekuphela kwendlela yokuba phambili komnye umfundi onamabanga afanayo esikolweni njengoko usenza kwaye osemi kwithuba elifanayo nelakho lokuba ibhodi iphonononge isicelo sakho kuqala ngaphambi kwabo.
Kukho imithetho ebekiweyo elawula ibhodi kwaye luxanduva lomfundi ukulandela le mithetho ukuba kufuneka athathelwe ingqalelo kuvavanyo.
Ukungathobeli imigaqo kunokubangela ukungafaneleki kwangoko komfundi ngebhodi yokuhlola. Onke amaxwebhu angeniswe ngexesha lokufakwa kwezicelo aphantsi kovavanyo olunzulu kunye nokuqinisekiswa.
Zonke izifundiswa eNigeria zilandela amanqanaba athile kunye neeprotocol kwaye kungcono ukuba umfundi akuqonde konke oku kwaye alandele ngokufanelekileyo.
Ngokwesiqhelo, emva komnxeba wezicelo, into elandelayo eza rhoqo kukuba abafundi bangenise izicelo zabo kwaye balinde olunye uluhlu olufutshane kunye nokuvavanywa, emva koko inqanaba lodliwanondlebe kunye noviwo luza ngokulandelayo.
Ukugqitha kwesi sigaba, umntu kufuneka azilungiselele ngononophelo kwaye abe yinkosi kwimibuzo yodliwanondlebe enokuthi ifunwe yibhodi.
Ukuba uyalinganisa kwinqanaba lokuqala kwaye emva koko usilele emva koko, ngekhe kungabinangqondo kwaphela kuba awuzukufumana thuba lifanelekileyo lokudlulela kwelilandelayo. Ibhodi isabeka abafundi abapasa kwinqanaba lesibini ukuya kwelinye inqanaba lokugqibela elibizwa ngokuba linqanaba lokuqinisekisa.
Benza oku ngenjongo yokuqinisekisa ukuba onke amaxwebhu abonelelwe ngumfundi abengekho ngandlel 'ithile ebubuxoki ngenxa yesizathu sokuzingca.
Le yeyona ndlela ilungileyo yokuzama ukubona ukuba imibuzo yabo ijongeka kanjani kwaye ilungiselelwe ngokufanelekileyo ukuba balindele ntoni.
Nokuba sele ungumamkeli kwi-DRM yezifundo okanye umntu ozimiseleyo, usadinga i-CGPA elungileyo ukuze uhlale emgceni.
Ukuba i-CGPA yakho iwela ngaphantsi kobuncinci emva kokuba unikwe isifundiswa se-chevron, isifundi siya kurhoxiswa.
Kukho amathuba amaninzi phaya kubantu abasemngciphekweni wokuyeka isikolo okanye ukuncama amaphupha abo nokuba kunento yokwenza nemfundo yaseyunivesithi okanye akunjalo. Ngamanye amaxesha, wonke umntu kufuneka ayenze ngenkalipho ukudubula lafoto nokuba izinto zinokujongeka kanjani.
Ukufaka isicelo semfundo ye-NNPC-DRM, kuya kufuneka ube une Iakhawunti yomfundi eyiScholastica eyiyo.
Ayisiyiyo nje i-DRM ebonelela ngolu hlobo lokufunda kubafundi baseNigeria, kukho amanye amathuba okufunda naphi na kwimibutho eyahlukeneyo kunye nabemi abaneenjongo ezintle. Thatha inyathelo lokufumana uncedo lwezemali oludingayo namhlanje.
Jonga la mathuba alandelayo;
Indlela yokufaka kunye nokuphumelela i-MTN scholarship
Iikhosi zasimahla ezikwi-Intanethi eCanada
Izifundo zasimahla zeKhompyutha kwi-Intanethi
Amaqonga okuFunda kwi-Intanethi ngesicelo sasimahla
Izifundo zasimahla zeYunivesithi ezikwi-Intanethi
I-DRM Scholarship eNigeriaIsifundi seNNPC eNigeria
Post Previous:Iikhosi ezili-15 eziSimahla zeKhosi zoQeqesho lokuLungisa iiSelfowuni
Okulandelayo Post:Izatifikethi zikaRhulumente zasimahla ezikwi-Intanethi, e-US, e-India, nakwabanye